amathiphu Ukuqomisana. Ubulula ikhefu kuze ubuhlungu
Njengoba isisho sibonisa, breaking up noma kunzima ukwenza kanjalo. Uma uke wanquma ukuqeda ubuhlobo ihambisana noma yimiphi imizwa noma imizwelo, kubalulekile ukuba ahlaziye obheka breaking it off ukugwema ukulimaza omunye umuntu. Esifanele etiquette break-up obujabulisayo buxhomeke ikakhulukazi ekubeni eside kangakanani wena nomaqondana wakho bebelokhu ubuhlobo, kangakanani ubuhlobo, futhi noma cha leyo mizwa mutual.
Lapho siphetha ibuphi ubuhlobo zama ukukwenza nge class futhi ziboniswe uzwela. Nanka amathiphu ambalwa kufanele ilandelwe lapho kuba isikhathi ukunqamula, kodwa khumbula ubuhlobo ngamunye futhi ukusabela uhlukile, ulindele obungakulindele njengempendulo.
Ungazami abeke izaba ezingezwakali nokudiliza uma ungekho. Vele ukumtshela umlingane wakho ukuthi kungani ubuhlobo ayisebenzi ngawe. Ukondla kuye lo ìit akusiwena, kungcono umugqa mei kungase kukwenze uzizwe Ngokuvumela umlingani wakho phansi lula, kodwa he she cishe ukubona ngokusebenzisa le futhi kungase ngisho bakha izizathu kungani asithandeki ngibenza ukuphatheka kabi more nosizi.
Do not String nawo
Uma iye yanquma ukuba nihlukane nothile, asikho isizathu sidonsa out ubuhlobo bakho. Ngokugwema kokuhlukana, umlingani ungase ezikhulayo ezingasho linamathele, into wena Ngokuqinisekile asifuni. Uma ufuna ukunqamula ubuhlobo, ake omunye umuntu azi msinyazana ngokufanelekayo ngangokunokwenzeka ukuze imizwa yabo musa qhubeka ujulisa futhi ukuthuthukisa.
Ngizibulale For Good
Into yokugcina umuntu kokuba silahlwe ufuna ukuzwa kuyinto II ngempela ufuna ukuqhubeka ubuhlobo bethu njengoba nje friendsî lapho kukhona namanje in love. Kungcono ngoba zonke iziphathimandla ukuba anikeze umuntu usuke breaking up with isikhathi esithile ukuze uthole phezu kwakho ngaphambi kokuzama ukwakha ubungane nabo. Futhi, ungazami ukushintsha ukuthandana nomuntu ìfriends nge benefitsî ubuhlobo uma wazi omunye umuntu namanje ofukamela imizwa ngawe. Lokhu kungase kunikeze nomunye umuntu ethembeni elingamanga ofuna ukuvuselela romance lapho, empeleni, ngeke. Lokhu kungaholela kudideka, zilimaze namazizo ngokuhamba kwesikhathi.
Bahlukane In Private
Ungacabangi ukuthi nje ngoba wena endaweni yomphakathi uma nihlukane nothile uyobe ngokuphumelelayo ayeke lowo muntu owenza a scene. Ngezinye izikhathi imizwa yakho ayikwazi yakhinyabezeka kungakhathaliseki ukuthi bangaki abantu abamzungezile. By breaking up nothile endaweni yomphakathi usuke ngokubeka lowo muntu e isimo esingaba okwakubangela amahloni esiqongweni ukucindezeleka kokuba silahlwe. Lokhu kubonisa ukuntula inhlonipho owabenza. Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa up into okufanele kwenziwe yangasese ukuze noma iyiphi imizwelo angavezwa amahloni.
Kungakhathaliseki ukuthi unquma ukuba nihlukane nothile, kungcono kakhulu njalo umthetho osemqoka engqondweni ñ ukwenza kwabanye njengoba nawe kuzodingeka ukuba kini. Uma ababephathwa silahlwe, uyofuna omunye umuntu ukuba abonise ukwethembeka kanye nenhlonipho ngakuwena. Gcina lokhu engqondweni uma uhlela indlela yakho break up. Musani umlingani wakho ku okungaphansi kwalokho ngendlela ukwedlula indlela ubungeke balindele ukuphathwa uma simo asibuyisele emuva.